Wararka - Nidaamyada korontadu waxay ka muuqdaan dhammaan dhinacyada nolosheenna
Nidaamyada korontada waxay ka soo muuqdaan dhammaan dhinacyada nolosheena ， sida: laambadda is-daahirinta ee la galiyay, laambadda daahirinta saqafka, laambadda is-daahirinta ee aan qarxin, laambadda jeermis-dilaha ee birta ah, laambadda soo-dhoweynta aluminium iyo wixii la mid ah ……
Waa maxay hababka rakibidda ee nalalka isdaahirinta ee ku dhex jira?
1. Meel saqafka saqafka ah ka fur dalool wareeg ah, oo dalool ka fur meesha loo baahan yahay in lagu rakibo laambadda saqafka ee ku dhex jirta, taas oo ku habboon rakibidda saqafka. Go'aanso meesha laambadda saqafka, cabbirka godkana wuxuu u dhigmaa aagga saqafka.
2. Markaad rakibaysid, marka hore ku rakib googoysyada dhajinta ee laambadaha labada dhinacba, oo ku rakib googoysyada labada dhinac ee laambadaha oo ku rakib nalalka godadka afargeeslaha ah ama wareegsan.
3. Xir xadhigga korontada. Dabool daboolka xarigga oo ku adkee boolal. Tirada booladaha hagaajinta haysta laambadda waa inaysan ka yarayn tirada godadka hagaajinta ee salka laambadda, dhexroorka boolalkuna waa inay u dhigmaan dhexroorka daloolka; laambado aan lahayn daloolo go'an oo salka ku haya (dalool daloollada inta la rakibayo), Waa inaysan jirin wax ka yar 3 boolal ama boolal si loo hagaajiyo laambad kasta, iyo bartamaha cufnaanta laambaddu waa inay la jaanqaaddaa xarunta cufnaanta boorarka ama boolal.
4. Laambadda dhig oo hagaaji. Laba-laabasho oo ku xaji wareegyada labada dhinac ee laambadda oo ku rid daahyada saqafka, iyo wareegyada gudaha ee saqafka, riix oo ku dabool maaskarada gacmahaaga korna u riix oo adkee.
Nalalka tamar-badbaadinta qarxa ee aan qarxin waxay tixraacaan laambado aan qarxin oo loo isticmaalo in lagu rakibo ilaha iftiinka tamar-badbaadiya. Sidaa darteed, waxaan caadiyan ugu yeernaa laambadaha tamar-badbaadinta qarxa oo aan la hubin sida laambadaha qarxa ee nalalka badbaadiya tamarta iyo nalalka qarxa oo aan lahayn ilaha tamarta badbaadiya.
Horumarka suuqa awgiis, isbeddelka tamar-badbaadinta ayaa noqday mid aad iyo aad u xoog badan, waxaana sii kordhaya laambadaha tamar-badbaadinta. Sidaa darteed, nalalka badbaadinta tamarta ayaa loo adeegsadaa dhirta kiimikada qaarkood, sahaminta saliidda, sifeynta saliidda, dhirta batroolka, dawooyinka, xeebaha, miinooyinka, godadka dhulka hoostiisa, iwm. Laambadaha lagu xiray shamacyada aan qarxin si loogu adeegsado dibadda waxaa la yiraahdaa tamar-qarxin- nalalka badbaadinta.
Astaamaha nalalka badbaadiya tamar-qarxa proof
1. Laambadda aan qarxin waxay ka kooban tahay qolof, dabool galaas kulul, shabag ilaaliya, iwm;
2. Qolofka waxaa sameeya ZL102 aluminium-shubay aluminium-shubay, oo dusha waxaa si elektaroonig ah loogu buufiyay budo. Waxay leedahay astaamaha qaab -dhismeedka iftiinka, xoog sare, iyo muuqaal qurux badan;
3. Fiilooyinka gudaha waxay ku xiran yihiin bilaa wireless si loo hubiyo in badeecaddu si fiican ula xiriiri karto duruuf kasta;
4. Meelaha lagu kululeeyo ee kuleylka badan waxaa loogu talagalay gudaha iyo dibaddaba laambad aan qarxin, taas oo si weyn u xoojisa shaqada kala-daadinta kuleylka ee sheyga iyadoo la hubinayo qaabka gaarka ah, si weynna loo hagaajinayo nolosha sheyga, heerka heerkulkuna yahay T4;
5. Dhammaan sagxadaha aan qarxin waxay qaataan duub-caddeyn la duubay waxayna kordhiyaan qaab-dhismeedka shaabadaynta, si badeecaddu ula jaanqaado waxqabadka qarxa iyada oo si weyn loo hagaajinayo shaqada biyuhu aanay lahayn iyo boodhka, heerka ilaalintiisuna wuxuu u sarreeyaa IP55;
6. Nalalka qarxa oo aan caddayn waxaa loogu talagalay hal-xabbad (balastarka ku dhex-jira, kiciyaha, magdhawga korontada), oo leh hufnaan iftiin xoog leh (ilaa 95% curiye awood), adeegsi habboon iyo dayactir, iwm .;
7. Haystaha laambadda E40 ayaa lagu rakibay gudaha, kaas oo lagu qalabeyn karo laambadda meerkuriga ee cadaadiska sare leh, laambadda sodium ee cadaadiska sare leh iyo nalalka halide halide biraha siday u kala horreeyaan. Waxaa jira habab rakibaadda oo ah nooca boom iyo saqafka;
8. Siliggu wuxuu ka soo galaa daloolka fiilooyinka isagoo adeegsanaya aaladda macdanta ledhka, waxaana jira boolal dhulka hoostiisa ku jira iyo bannaanka qolofka, biibiile bir ah ama fiilooyin fiilo ayaa la isticmaali karaa.
Qolka Nadiifka ah, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Daaqadda Qolka nadiifka ah,